आफ्नो डिभो`र्सको बारेमा पहिलोपटक बोलिन चर्चित टिकटकर स्मारिका (भिडियो हेर्नु`स्)
August 24, 2021 3009
चर्चित टिक`टक स्टार स्मारिका ढकाल`को डिर्भोष भएको छ । धेरै दिनदेखि उनको डिभोर्सको चर्चा टिक|टकमा व्यापक भएपन उनका पूर्वपतिले आफु`हरुले खुशी साथ अलग भएको जान|कारी दिएका छन् । स्मारिकाका श्रीमान विवेक अधिकारीले हिजो टिकटकमै ला|इभ आएर आफू`हरुको सम्वन्ध अन्त्य भएको बताए पनि अन्त्य हुनुको कारण भने खुलाएनन् ।
आ–आफ्नै हिसा`बले करिअर अगाडि बढाउने भनेर आफु|हरु छुट्टिएको र एक अर्कालाई अहिले पनि सम्मान गर्ने उनले बताए । सेलिब्रिटी भइसकेपछि श्रीमान`लाई छोडेको आरोप आए`पछि उनले यस्तो आरोप नलगाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
‘नाम र पैसा कमाए`पछि श्रीमानलाई छोडिस भन्ने जुन आरोप लगाइ|एको छ, त्यो बिलकुल गलत हो,’ उनले भने, ‘यस्तो गलत आरोप लगाउन बन्द गरि`दिनुहोला विवेकले भने ।झापा बुधबारे निवासी स्मारिका र विवेकबीच केही वर्षअघि ‘प्रेम प्लस मागी’ बिहे भएको थियो ।
नजिकै घर भएका दुवैले एक–अर्कालाई मन पराए`पछि परिवारको सहमतिमा परम्प`रागत तवरले विहे भएको हो । विहे गर्दा स्मारिको उमेर १८ वर्षको मात्र थियो ।मलगायत मेरो परिवारको सपोर्ट नभए|को भए उ त्यो ठाउँमा पुग्थेन ।
सम्वन्ध तोडि|नुमा सबैका आफ्ना पर्सनल प्रोब्ल|म हुन्छन् । त्यो सबै भनिरहनुपर्ने जरुरत छैन । सम्वन्ध तोडिएको हो । हामी आफ्नै ढंगले आ–आफ्नो करिअर अघि बढाउँ भनेर आपसी समझदारीमा राजी`खुशीले छुट्टिएका हौं भन्दै विवकेले खु|लस्त पारेका छन् । बाँकी भिडियोमा:
Prevप्र`हरीनै ग्राहक बनेर गएपछि हाइ-प्रोफाइल वे`श्यावृतिको भण्डाफोर, ३२ बर्षिया मोडेल पक्रा`उ
Nextदुई श्रीमतीले गरे श्रीमानको बाँड-फाँट ३ दिन जेठीसँग, ३ दिन कान्छीसँग, १ दिन छुट्टि !
अतिनै मार्मिक कथा मन थामेर एक पटक अवस्य पढ्नुहोला !
महान श्रीमानले अस्पतालमै मनाइदिए अनिताको जन्मदिन ! यस्तो बन्यो माहोल (भिडियो सहित)
हेर्दाहेर्दै आँखै अगाडी साथीलाई फेवातालले डुबायो’, साथी डाको छोडेर रोए (भिडियो सहित)